Ankoatra izay, tonga teny an-toerana ihany koa ny kaominina Antananarivo (CUA) sy ny solontenan’ny birao nasionalin’ny fitantanana ny loza ara-boajanahary (BNGRC) ary ireo solontenan’ny orinasa tsy miankina nanolo-tanana. Nanolotra vary, voamaina, menaka, siramamy, fitaovana lehibe fasiana rano madio ary fitaovana fivoahana, ireo orinasa tsy miankina mivondron ireo. Trano miisa 32 tafo izay misy fianakaviana traboina miisa 221 no notolorana fanampiana. Rehefa izay dia nihazo ny traboinan’Ampamarinana ahitana 189 tafo mipetraka etsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka izy ireo. Nanome fitaovana lehibe 2 fasiana rano madio ny CUA ary nisy ihany koa ny fitaovana hafa avy amin’ireo orinasa tsy miankina hiarovana amin’ny mety ho fiparitahan’ny loto.